Madagasikara: Sazy Mitondra Mankamin’ny Fitontonganan’ny Toe-karena Sy Tsy Fanjarian-Tsakafo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2011 3:46 GMT
Tato anatin'ny taona vitsy dia niaina fitontonganana misoko mangina ny toe-karen'i Madagasikara, izay efa marefo rahateo, miantraika mafy amin'ny fiainan'ireo vahoaka Malagasy an-tapitrisany izany.
Roa taona sy tapany teo ambany fitantanan'ny governemantan'i Andry Rajoelina (antsasaky ny fe-potoana ara-dalàna ho anà filoham-pirenena), ratsy indrindra eran-tany no nanakilasian'ny gazetiboky Forbes ny toe-kareny; an'aliny no very asa ary mananontanona ny tapany atsimon'ny firenena ny olana ara-tsakafo.
Efa ampolo-taonany mahery no zara raha homana ny tany amin'ity faritra ity, saingy manampahaizana iray avy amin'ny Firenena Mikambana no nampandre fa ny sazy nampiharina amin'ny Madagasikara no vao mainka nahatonga ny toe-draharaha ho tsy azo iainana raha resaka fiahiana ara-tsakafo.
Tanimbary ao Madagasikara. sary an'ilay mpampiasa Flickr, Luc Legay (CC BY-SA 2.0).
30 volana izao i Andry Rajoelina, ben'ny tanàna teo aloha ary tomponà orinasa Malagasy fanaovana dokam-barotra sy media, no naka ny fitondràna an'i Madagasikara tamin'ny alàlan'ny fanonganam-panjakana miaramila tamin'ny 2009; io hetsika io dia niteraka avy hatrany sazy avy amin'ny ankamaroan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Nisy fiantraikany ratsy be teo amin'ny fiarovana ara-tsakafo ireny sazy ireny, hoy i Olivier De Schutter, iraka manokan'ny Firenena Mikambana momba ny Zo ara-tsakafo:
“Ny vokany dia i Madagasikara izao no manana taha ambony indrindra amin'ny zaza tsy ampy sakafo maneran-tany, taha azo ampitahaina amin'ireo misy ao Afghanistan na Yemen,” hoy ny teniny. [..] ny fanapahan-kevitra hampiato an'i Madagasikara tao amin'ny ” African Growth and Opportunities Act” na AGOA avy amin'ny Etazonia dia nosandaina fahaverezan'asa 50.000 raha kely teo amin'ny sehatry ny fanenoman-damba, izay manome ny antsasaky ny fanondranana entana avy ao Madagasikara.
Fanampin'izany, naaton'ny Fiombonambe Eraopeana ireo fandaharan'asa niandry fanasoniavana talohan'ny olana politika, nampihantona koa ny fanampiana rehetra ho an'ny fampandrosoana mandalo amin'ny governemanta.
Ilay mpahay toe-karena fanta-daza sady mpanara-maso ny fanampiana ao amin'ny Aid Watchers, William Easterly, dia niteny tsy misy hafa amin'izany herintaona lasa izay mikasika ireo sazy miantraika amin'ireo mahantra sy tsy tonga amin'izay tena tanjona nokinendriny, ireo olona eo amin'ny fitondràna:
Maro ireo mpanakiana nanao fanoherana vantany vao nanambana ny hanàla ny fifanarahana ara-barotra manome tombon-dahiny an'i Madagasikara ny governemanta Amerikana mba hanerena ny governemanta mahabe resak'i Andry Rajoelina hampanao fifidianana.
Ny indostrian'ny lamba Malagasy dia tantara velon'ny firoboroboan'ny “African Growth and Opportunity Act (AGOA)” Amerikana, izay nanafoana ny fatra azo alefa any Etazonia sy ny haba amin'ireo vokatra an'arivony avy amin'ireo firenena Afrikana. Tonga avo telo heny ny fanondranana entan'i Madagasikara nandritra ny taona telo voalohany tamin'ilay fandaharan'asa, ary ny sehatry ny fanenoman-damba, izay manome ny 60 amin'ny fanondranana ataon'ny Malagasy, dia namorona asa mivantana 50.000 sy tsy mivantana eo amin'ny 100.000 eo ho eo. [..]
Manomboka mahita ny vokatr'izany amin'ny toe-karena manara-dalàna sy tsy manara-dalàna isika izao:
Ozinina manakatom-baravarana sy fahaverezan'asa amin'ireo orinasa: “mandroaka mpiasa ireo orinasa ary hitantsika mitombo be ny isan'ireo tsy an'asa” [..]
‘Zatra nahazo 20.000 ariary ($9.30) isan'andro aho,’ hoy i Soloniaina Rasoarimanana, izay nivarotra akanjo teny amoron-dàlana efa ho 10 taona. ‘Ankehitriny, noho ny olana ara-politika sy ny fitombon'ny fifaninanana, manodidina ny 5.000 ariary ($2.30) isan'andro no azoko.’” [..]
Anisan'ny takaitra TSY hatan'ny masontsika: ny mariky ny fisongan'ny fieritreretan'ny goveremantan'i Andry Rajoelina hiditra amin'ny fitondràna iaraha-mitantana na fametrahana fitantanana demaokratika.
Manampy ny lisitr'ireo voka-dratsin”ny sazy [fr] ilay bialogera Malagasy, Ndimby :
Fanampin'izany, betsaka ny orinasa sempotry noho ny olana (krizy), nefa koa noho ny filazàna “fanavaozana ny fepetra famorian-ketra” nataon'ny sampan-draharahana misahana izany, izay toa manaraka ny fomba ‘roulette russe’ fa tsy ny tena lalan-jotra marina tokony ho izy. [Fanamarihana: ny “fanavaozana ny fepetra famorian-ketra” dia tetika efa malaza hanafaizana ireo orinasa tsy miandany amin'ny governemanta] Ny fampahantrana ny sarambabem-bahoaka dia zava-misy ary ireo voadonan'izany dia voatery miditra amin'ny sehatra tsy manara-dalàna mba hiantohana ny isam-bolany. Ny firongatry ny mpivarotra amoron-dalàna no porofo voalohany indrindra maneho izany. Ny porofo faharoa dia ny fitombon'ny dokambarotra an-gazety momba ny karazan-tolotra aroso amin'ireny “trano fanorana” ireny, izay manao izay ho afany amin'ny fampihenana ny tsy fananan'ny vehivavy asa.
Ny firoborobon'ny fivarotan-tena dia velabelarina amin'ny antsipirihany ao amin'ny IRIN News, izay ahitàna fiakaran'ny isan'ireo ankizivavy kely miezaka mandoa ny saram-pianarany. Ny fijoroana vavolombelona etsy ambany, Nadine, 16 taona, dia milaza ny andavanandrom-piainany:
[Nofinofin'i Nadine] ny hanokatra fivarotana akanjo rehefa avy mahavita ny fianarana fohy arahany amin'ny resaka famoronana endrika eo amin'ny sehatra zaitra, saingy mandritra izany, miaraka amin'ny namany valo hafa, nirona any amin'ny fivarotan-tena izy handoavany ny saram-pianarany. Ampandoaviny US$7 ny indray mandeha, any amin'ny faritra mahantra ao Antananarivo, eny 67Ha eny izy no miasa. [..] “Ny ankabeazan-dry zareo [ireo namako] dia toa ahy; miadidy ny ray aman-dreniny ry zareo [amin'ny alàlan'ny fivarotan-tena]”, hoy izy. [..] Miroarisoa Rakotoarivelo, mpitarika ny Groupe Développement Madagascar, niteny tanaty fandalinana iray vao haingana natao tamina mpivaro-tena 129 dia nilaza fa miakatra be ny isan'ireo zaza tsy ampy taona amin'izy ireny. “Miakatra be izy io, ary ny porofo azoko omena anareo dia ny antontan'isa Janoary-Aprily 2011 azonay,” hoy izy mantsy ny IRIN, nampiana tamin'ny hoe saika ny antsasak'ireo mpivaro-tena voatsonga no latsaky ny 18 taona.
Misy vahaolana manangasanga ve?
Napetraka hikarakara fifidianana madio ny governemanta tetezamita. Roa taona izao no lasa ary mbola ifampitadiavana foana ny fametrahana ny datin'androm-pifidianana:
Ny vondrona mpanelanelana mandindry ny hoe sty mbola azo tao ny fandatsaham-bato raha mbola tsy tanteraky ny Fitantanana Andry Rajoelina ny fepetra tao anaty tondrozotra napetraky ny SADC tany ampiandohan'ity taona ity ho fampitsaharana ny olana politika eo amin'ny firenena. Ilay tondrozotra natolotr'ilay mpanelanelan'ny SADC, Leonardo Simao, dia manome soso-kevitra amin'ny hialàn'izay rehetra mihevitra ny hirotsaka hofidiana amin'ny asany. Nampangidihidy an'Ing Rajoelina izany [..] Milaza izy fa efa nampiharina ilay tondrozotra teo aloha, noho izany tsy misy fepetra hafa tokony hanampy azy intsony. Ny Novambra, nandany lalampanorenana vaovao ny firenena izay nampidina ny taona farany ambany ho an'izay te-hilatsaka hofidiana ho filoha, izay mamela azy rehefa miala eo, 36 ankehitriny, ho afaka hirotsaka.
Mila mitady vahaolana ara-toekarena ihany koa. Mbola zavatra mampiahiahy koa, ny raharaha momba ny tany azo volena izay teboka iray isan'ny nanonganana ny filoha teo aloha Ravalomanana no miverina amin-kery ankehitriny, satria ny governemanta dia nampanofa tany mandritra ny 50 taona amin'ny India amin'ny sanda $37 isaky ny hektara ny taona iray.
Eo afovoan'ny zava-manahirana ny vahoaka Malagasy ny raharahan-tany, raha mbola mitombo hatrany kosa ny fanesorana ny tantsaha amin'ireo tany mamokatra.
Bekoto, mpihira malaza sady mafàna fo amin'ny fiarovana ny zon'ny tantsaha Malagasy dia nanolotra sarinteny iray hamaliana ny fitarainan'ireo tantsaha [fr]. Manamafy izy fa mila mampiasa ny teknolojia vovao ireo tantsaha mba hampahafantarana ny mpampiely vaovao mikasika ny fanesorana an-kerisetra azy ireo amin'ny taniny ataon'ny manampahefana ary ho fitaovana fifampiraharahàna hiadiany ny zony hanana sakafo sy hiasa ny taniny onenan-dry zareo.
Manome soso-kevitra i De Schutter fa hoe ny vahaolana iray amin'ny olana ara-tsakafo dia eo an-toerana ihany no hahitàna azy:
Fantatsika fa ny fomba fambolena vary maro anaka, fomba izay ny Malagasy no namorona azy, dia ahafahana mampitombo ho avo roa heny, telo heny na efatra heny ny vokatra.
Tetikadim-pirenena iray ho fanohanana io karazana fomba famokarana iray miaro ny tontolo iainana io dia mety hahatonga fahavitan-tena ara-bary ho an'ny Nosy manontolo ao anatin'ny telo taona.
Eo amin'ny lafiny politika, Ndimby milaza fa ny fifidianana tokana ihany no lalan-kivoahana amin'ny olana ary ny fanamaivanana ireo sazy ara-toekarena. Manampy izy fa ilaina atsofoka ao anatin'ny fepetran'ireo fifidianana ho avy ny hoe fotoam-pitondrana indray mandeha tsy avaozina[fr]. Mety mba hiantoka ny fametrahana fototra mafy ho anà fifidianana demaokratika sy maharitra izany .